IZIDLO EZINGCONO ZOKUDLA OKUNE-KALORI EZIPHAKAMILE - shopgiejo.com
UKUDLA KAHLE KWEKHALORI Ephansi
Nalu uhlu lwezintandokazi zami zokudla okunama-calorie aphansi;
Inkukhu ethosiwe ngamakhambi kanye nesawolintshi
Ukudla okumnandi okugcwele amaprotheni amancane, amavithamini, nezinye izakhamzimba ezibalulekile ezifanele ukudla kwakusihlwa okukhethekile.
Isobho elinokhilimu eliphelele, ama-carbohydrate aphansi kanye nezithako ezinobungani benhliziyo.
Inkukhu yenyathi e-crispy ene-lettuce wraps
Kulula ukuyilungisa, kumnandi, futhi kufakwe phezulu noma kusongwe ngolethisi, imifino, noma iquinoa ukuze ukwandise ukudla kwakho izakhi.
Inothe nge-fiber, ama-calories aphansi, futhi kulula ukuyilungiselela. Ilungele ukwehlisa imizwa yendlala nokulawula isifiso sokudla.
Isobho lesipinashi se-tortellini
Isobho elimnandi elingathathwa nelayisi noma isinkwa futhi kulula kakhulu ukulungiselela.
Izinketho eziphansi zenyama ye-carb, okumnandi kakhulu, ungakwazi phezulu nge-tomato sauce noma ezinye isobho.
UKUDLA OKUNEKALORI ELIphansi
Umsebenzi kadokotela womndeni uhlanganisa ukuhlukahluka okubanzi komtholampilo, okudinga ulwazi oluningi kanye ne-erudition evela kuchwepheshe. Nokho, ngikholelwa ukuthi into ebaluleke kakhulu ngodokotela womkhaya ukuba umuntu ngoba ukubambisana nokuqondana phakathi kukadokotela nesiguli kubalulekile ekuqinisekiseni ukunakekelwa kwezempilo okuphumelelayo. Ezinsukwini zami zokuphumula, ngiyathanda ukuba semvelweni. Kusukela ebuntwaneni, bengikuthanda kakhulu ukudlala i-chess nethenisi. Noma nini lapho nginesikhathi sokuphumula, ngijabulela ukuzungeza umhlaba.
I-Sound Bites Nutrition LLC - ephethwe futhi iqhutshwa isazi sezokudla esibhalisiwe, uLisa Andrews
Ukubuyekezwa kwe-Dixie Botanicals
KATS BOTANICALS CBD UKUBUYEKEZWA
UKUBUYEKEZWA KOMKHIQIZO WE-SPECTRUM PURE SPECTRUM
I-Building and Online School ka-Vivien Schapera
Umbhali othi "Ukwenza kanjani," u-Vivien Schapera wabelana ngendlela yena naye
I-adventure ephathekayo ne-Flatbike, Inc.
Konke kwaqala ngenkinga. Bese kuba nezinkinga ezengeziwe.
I-AFRICANAFEEL.COM - inkundla yewebhusayithi enikeza i-Afrika yangempela-
imikhiqizo ephefumulelwe namasevisi Igama Lebhizinisi kanye nalokho elikwenzayo.
Ungaba nentshisekelo kukho
I-Sound Bites Nutrition LLC - ephethwe futhi iqhutshwa uchwepheshe wezokudla obhalisiwe, uLisa Andrews
Indaba yangaphambilini Post Previous:
UKUBUYEKEZWA KWE-TOMMY CHONGS CBD
Indaba Elandelayo Post Next:
I-R+R MEDICINALS CBD REVIEW
Okwakamuva okuvela Ezempilo
Ijenali yezinhlamvu iwuhlobo lwedayari ethuthukisiwe noma incwadi yokubhalela enezigaba ezihleliwe zokurekhoda
ISIKHATHI ESIHLE SOKUZINIKELA OKUFANELE UKWEHLUKA Isisindo
Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​​​komsebenzi, ngingasho ngokuqinile ukuthi ukusebenza ekuseni kungcono kakhulu
IZENZO EZINGCONO ZOKUVIMELA UKULAHLEKELWA KWAmathambo
Njengongoti wezokudla, ukudla ukudla okunempilo okune-calcium eningi, uvithamini D, amanye amaminerali kanye nokuhola a
I-CARBS ABANGAPHAMBILI OKUDLIWA ABANTU ABAPHILA ISIKHATHI ESIDE EMHLABENI
Ubani omunye ofuna ukungena ekudleni impilo ende njengami? Yingoba ngiyafuna
Yiziphi ezinye zezinzuzo ezisebenzayo? Ngicela uchaze ukuthi kungani.
Ukugijima kusiza ukulala kwakho kangcono ngokuthuthukisa ikhwalithi yokulala nokulala ngokushesha. Kuhilela futhi
Imibuzo yemidiya nabezindaba